मेरो कथा - Radio Katha
मूलपृष्ठ » Story » मेरो कथा
2011-10-23 सुमित्रा शर्मा / भवानी उमावि, खानीगाउँ–२, पर्वत / पर्वत
प्राकृतिक रुपमा सुन्दर हराभरा एउटा गाउँको गरिब परिवारमा ... वि.स. २०५० साउन २९ गते जन्मिए । सायद लाग्छ त्यो दिन नै यस्तो थियो होला पानी पर्नको लागि घाम नै बादलले छेकिदिएको आकाशमा पनि काला बादलहरु चारैतिर मडारिरहेका र प्रकृति नै ज्यादै एकान्तमय भएको तर साउन कै एकान्तवनको कुन्जनबाट आफ्नो कोकोल तर विरहको भाकामा एकै शब्दमा को हो ? को हो ? भनीरहेको थियो । यसरी यो उराठ लाग्दो दिनमा म जन्मिएर जब म पाँच बर्षकी भएँ मलाई कक्षा १ मा भर्ना गरि दिनु भयो । मैले लगातार कक्षा १, २, ३ र ४ पास गर्दै कक्षा ५ मा पुगेँ । त्यस समयसम्म म कक्षामा दोस्रो हुन्थेँ ।
कक्षा ५ को पढाई चलिरहकै समयमा एक दिनको कुरा हो । फागुन महिना अन्तिम तिर थियो । गर्मी पनि बढीरहको थियो । बिरुवाहरुले नयाँ पालुवा फेर्नेको लागि आफ्ना पुराना पातकहरु जमिनमाथि खसाली रहेका थिए । चारैतिर वातावरणको सुनसानमय थियो । म उठेर हातमुख धुन लागि रहेकी थिएँ । मेरो आमा अघिल्लो दिनको योजना अनुसार नै तयार हुँदैहुनुहुन्थ्यो । जब बिहानको घडिमा ४ः३० बजेको थियो । चिया पिउदैँ त्यही समयमा मरे आमा कोठाबाट बाहिर निस्केर भन्नु भयो । ‘सुमि राम्रोसँग बस्नु है भाइबहिनीको राम्रो ख्याल गर्नु है, म मामा घरबाट २÷४ गते तिर घर फर्कन्छु आमाले भन्नु भयो ।’ अनि मैले रुदै भनेँ, ‘आमा हामीलाई यस्तो एकान्त ठाउँ र गरिब झुपडीमा एक्लै छोडेर काही पनि नजानु, भाइबहिनी साझ परेपछि आमा–आमा भनेर रुन्छन् फेरी म स्कूल जानुपर्छ ।’ त्यसपछि आमाले भन्नु भयो, ‘नानु म तिमी र भाइबहिनीलाई राम्रा राम्रा लुगा र मिठा–मिठा खाने कुरा ल्याइदिन्छु नरोइकन बस्नु, राम्रोसँग पढ्नु है ।’ म जति रोएँ पनि मेरो केही सिप लागेन आमाले म र भाइबहिनी मात्रलाई छोडेर मामा घर जान्छु भनेर जानु भयो । त्यस पछि म मनभरी बिछोडको पिडालाई लुकाउँदै भाइबहिनीलाई सम्झाइ बुझाई गर्न तर्फ लागेँ । भनिन्छ ‘उडेको बतास, बगेको नदीलाई कसैले पनि रोक्न सकिदैन’ भने झैं हामीलाई बिदाई हातहरु हल्लाउदै आमा आफ्नो बाटोतिर लाग्नु भयो । आमा जानु भएपछि म र भाइबहिनी मात्र झोपडी घरमा बस्न बाध्य भयौं । दुःख र पिडालाई हृदयमा राख्दै आँखाबाट आसु बगाउँदै म र भाइबहिनीले आमालाई बिदाइ ग¥यौं । त्यस समयमा हाम्रो बाबा घरमा हुनुहुन्थेन । बाबा कामको सिलसिलामा सहरतिर बस्नुहुन्थ्यो ।
त्यो समयमा घरमा एउटा भैंसी थियो । बिहान बेलुकय त्यो भैसीको स्याहार सुसार गर्नुपथ्र्यो । बिहान उठने बितिक्कै भाइबहिनीको लागि नास्ता लगायत खाना बनाउने, भैसीलाई घाँस काटने स्याहार सुसार गर्ने र स्कूल जाने मेरो दिनचार्य बनिसकेको थियो । बाबा पनि कहिले आउनु भएन । म सधैं साँझ बिहान भाइबहिनी र भैसी कै स्याहारसुसारमा व्यस्त हुन्थेँ । त्यसैले मैले मेरो पढाईलाई निरन्तरता दिन नसक्दा कक्षा ६ मा जाँदा मेरो रोल्नं. दुईबाट बाइस पुग्यो । आमाले अर्को महिना आउँछु भन्नु भएको थियो । तर धेरै दिन बित्दा पनि घर फर्किनु भएन । बाटोमा कोही देख्दा पनि आमाको झल्को झलझली आइरन्थ्यो अनि आसु नै आसु हुन्थ्यो । सानो भाईले, ‘दिदी आमा कहिले आउनु हुन्छ’ भनेर सोध्दाखेरी त हृदय नै रोएर आउथ्यो । अनि म भाइलाई जबाफ दिन्थे, ‘भोली पर्सी आउनु हुन्छ बाबु तिमीलाई राम्रो नाना ल्याइदिनु हुन्छ ।’ यसैगरी हाम्रा दुःखका दिनहरु बित्दै गए । आमा आउने प्रतिक्षाका घडि लम्बीदै गयो । तर बाटो हेर्ने आँखारुपीहरु अस्ताउदै गयो । यसरी नै एक वर्ष नै बित्यो ।
एक दिनको कुरा हो । माघको महिना थियो । कहाली लाग्दो जाडो । वातावरण पनि कस्तो गुम्म परेको देखिन्थ्यो । वातावरण नै गुम्म परेको दिन थियो । मेरो बाबाले पनि सानीआमा लिएर घरमा आउनु भयो । हुनत मेरो आमा मामाघर जान्छु भनेर जानु भएको थियो । तर आजको दिनसम्म फर्केर आउनु भएको छैन । मामा घर चितवनमा थियो ।
सानीआमा आएको केही समयसम्म हामीलाई धेरै माया गर्नु भयो । राम्रा–राम्रा लुगा कपडा ल्याइदिनु हुन्थ्यो । मिठा–मिठा खानेकुरा खाने कुरा खान पाउँदा त आमा भनेकये नै यही हो जस्तो लाग्न थाल्थ्यो । तर अहिले हाल म कक्षा १२ मा पढछु । मेरो भाइ कक्षा ५ मा पढछ । बहिनीहरु ५, ६ र ९ मा पढछन् । मेरो सानी आमाले हाम्रो पढाईप्रति कुनै पनि निगरानी गर्नुहुन्नु । उहाँले एउटा छोरी जन्माउनु भएको छ । जति आफ्नो छोरीको बारेमा सोच्नु हुन्छ त्यति हाम्रो बारेमा सोच्नु हुन्न । केही कुराको जब हामीलाई आवश्यकता पर्दछ तब उहाँ झर्केर बोल्नु हुन्छ । त्यसैले म त केही बोल्न पनि सक्दिन केबल रुन बाहेक अरु केही बिकल्प छैन । तर म चाहान्छु धेरै पढेर ठूलो मान्छे बन्ने चाहाना छ तर मेरो चाहाना कसरी गर्नसक्छु होला भनेर सोची हरन्छु । यो मेरो चाहाना मात्र हो सम्भव छैन । किनकी मसँग केही बिकल्पै छैन । र मेरो भाइ बहिनीहरुलाई पनि पढाएर ठूलो मान्छे बनाउन चाहान्छु तर केगर्नु मुखले भनेर मात्र हुँदैन । हामीलाई समाज, देश र व्यक्तिले केही गर्न सहयोग गरोस् ।
एक दिनको कुरा हो । असार महिनाको थियो । बाहिर झमझम पानी परीरहेको थियो । सबैजना खाना खाई सकेर आ–आफ्नो काममा लागि सकेका थिए । तर मैले खाना खाएकी थिएन खाना खान बाँकी थिएँ । सानो बहिनीले खाना खान बोलाइन । त्यसबेला सानीआमाले भन्नु भयो, ‘काम गर्न नसक्ने मान्छेले त खाना पनि के खानु ।’ सानीआमाको त्यो वचन सुन्दा मलाई ज्यादै नराम्रो लाग्यो । अनि म कोठामा बसेर रुन थालेँ । यस्ता अनेक समस्या झेल्दै बोझ सहदै सहदै आज म यहाँसम्म आइपुगेँ । तर म मेरा लगायत मेरा भाइ बहिनीको भविष्य सोचेर साहृै दुःखी हुन्छु कहिले सुखी हुन्छु, कहिले एकान्तमा बसेर रुन्छु, कहिले यीनै बिषयमा गजल, कविता, कथा लेख्न थाल्छु । अनि ओहो म किन रोएकी हुँ मलाई ईश्वरले एउटा रम्रो शरीर र स्वस्थ् दिमाख दिनु भएको छ । म मेरो यदि दिमाखलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्छु, धेरै पढछु कडा परिश्रम गर्छु र ठूलो मानव बनि भाइ बहिनीलाई धेरै पढाउछु राम्रा बनाउँछु समाजको र राष्ट्रको लागि नै एउटा ठूलो र राम्रो मान्छे बन्छु भनेर सोचीकन आफ्नो दुःखलाई शान्त पार्ने पर्यत्न गर्छु ।
तर अर्कोतिर म एक नेपाली महिला हुँ । यहाँ नेपाली महिला माथि गरिने दमन शोषण अत्याचार बारेमा हामी सबै नेपालहीहरुलाई थाहा नै छ त्यसै समाजमा म पनि हुर्किराखेको छु । म चाहानछु परिवार, समाज र राष्ट्रमा बासोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको मन मस्कीष्कबाट नेपाली महिलालाई हेरीने दृष्टिकोण असल होस भनेर यसको लागि म आफु नै केही गर्नु छ तर म कसरी यो सब कुरालाई सम्भव बनाउने यदि मैले एउटा राम्रो अवसर पाएर राम्रो गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा म आफ्ना क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्थेँ । म पनि दुनियाँ जस्तै धनि मानिस बन्थेँ र यस्ता बालबच्चालाई सघाउँथे कि जसले सानो उमेरमा नै आफ्नो आमालाई गुमाएर मातृत्व प्रेमबाट बञ्चितछन् । जो राम्रोसँग पढ्न चाहान्छन् र परिवार, समाज र राष्ट्रमा नै केही गर्न सक्छु भन्ने आँट बोकेकय पनि एक दिन राम्रो मान्छे बन्ने छु र यो सम्पूर्ण कार्य गरेरै छाड्ने छु ।